कसरी बच्न सफल भए गगन थापा ? कार्यालयभित्र पत्रकारलाई प्रवेशमा रोक - Dainik Nepal
कसरी बच्न सफल भए गगन थापा ? कार्यालयभित्र पत्रकारलाई प्रवेशमा रोक
दैनिक नेपाल २०७५ मंसिर २० गते ८:३८
काठमाडौं, २० मंसिर । विवादास्पद एसिया प्यासिफिक समिटमा सरकारलाई प्रयोग गर्न आयोजक युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (यूपीएफ) र त्यसको मातृसंस्था युनिफिकेसन चर्च वर्षौंदेखि सक्रिय पाइएको छ । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
एसियाली राजनीतिक दलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आईक्याप) का संस्थापक अध्यक्ष तथा फिलिपिन्सका पूर्वसभामुख डी भेनेसिया )पहिलो लहरमा बायाँबाट चौथो), युनिभर्सल पिस फेडेरेसनका अध्यक्ष थोमस वाल्स (सोही लहरमा बायाँबाट दोस्रो) र अन्य विदेशी नेताका साथ प्रधानमन्त्री केपी ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल । गत जुलाईमा भएको यही भेलाले नेपालमा मंसिर १४ देखि १७ सम्म एसिया प्यासिफिक समिट गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कोरियाका इसाई धर्मगुरु सन म्युङ मुनले सन् २००५ मा स्थापना गरेको यूपीएफको नेपाल शाखाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलगायत ४ हजारभन्दा बढीलाई ‘शान्तिदूत’ भन्दै सम्मान गरिसकेको छ । यूपीएफ नेपालले सानाठूला सबै दलका नेतालाई सम्मान गर्ने र विदेश घुमाउने काम गर्‍यो ।
‘सामाजिक कामका लागि भनेर खोलिएको सार्वजनिक उद्देश्यको संस्थामा मिडियालाई रोकतोक किन रु’ भन्ने जिज्ञासामा उनले ‘एकनाथ सरलाई सोध्नु होला’ भन्ने जवाफ दिइन् । यूपीएफको कार्यालय भनिए पनि भवनभित्र युनिफिकेसन चर्च रहेको र इसाई धर्ममा मानिसलाई बदल्न विभिन्न रणनीति बनाइने गरेको संस्थासँग नजिकका केही व्यक्तिले जानकारी दिए ।
परिवार दलको घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयले पनि उनको दाबी पुष्टि गर्छ । ‘मूलतस् विश्व प्रसिद्ध शान्तिनायक डा। सन म्युङ मुनको शान्ति देन हाम्रो प्रमुख विचारको स्रोत हुनेछ, तसर्थ हाम्रो दर्शनलाई मुनवाद पनि भन्न सकिन्छ,’ उक्त दलको दोस्रो महाधिवेशनका बेला २०७३ असार २१ मा अध्यक्ष ढकालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको पृष्ठ ४५ मा उल्लेख छ, ‘यो नयाँ विचार भएकाले सम्पूर्ण कार्यकर्ता यथाशीघ्र प्रशिक्षित भई तमाम नेपालीबीचमा यो दर्शन फैलाउनु हाम्रो साझा दायित्व हुनेछ ।’
पार्टीको सबै खर्च यूपीएफ केन्द्रीय कार्यालयले व्यहोर्दै आएको छ । दुई वर्षअघि गरिएको उक्त साधारणसभाबारे यूपीएफ एसियाका शिक्षा निर्देशक डा। रोबर्ट किट्टेलले यूपीएफको अन्तर्राष्ट्रिय मुख्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउन सफल भएकामा आफूहरू आश्चर्यमा परेको उल्लेख छ ।